Al-Shabaab oo ku bixinaya xogta Obama & Hilary Clinton Geel & digaag(DHAGEYSO) – SBC
Al-Shabaab oo ku bixinaya xogta Obama & Hilary Clinton Geel & digaag(DHAGEYSO)
Posted by editor on Juun 9, 2012 Comments
Iyadoo dawlada Mareykanka ay todobaadkan ku dhawaaqdey in ay ku bixinayso malaayiin doolarka Mareykanka dilka iyo soo qabashada hogaamiyasha sar sar ee xarakada Al-Shabaab ayaa arintaais waxaa caksigeeda abaalmarin ku dhawaaqay kooxda Shabaabka.
Website ku hadla afka xarakada Al-Shabaab ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ku yabooheen bixinta 10 neef oo geel ah oo ay siinayaan sida ay sheegeen qof kasta oo u soo gudbiya halka ay uu ku sugan yahay Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, iyagoo sidoo kale 10 digaagad iyo 10 diiq siinaya qofkii u soo gudbiya xogta xogta xoghayaha arimaha dibada Mareykanka Hillary Clinton.
Warbixin cod ah oo lagu baahiyey website-kaasi ku hadla afkaarta Shabaabka uuna duubay Sheekh Fu’aad Maxamed Khalaf oo ka mid ah saraakiisha Shabaabka ee Mareykanku madaxooda malaayiinta doolar dul dhigay ayaa sheegay in cid kasta oo u soo gudbisa xogta Barack Obama oo uu ugu yeeray shaydaan & Hillary Clinton ay siinayaan abaalmarinta kor ku xusan.
Warkan ka soo baxay Fu’aad Khalaf ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxiisa 5 milyan oo doolar oo ay dulsaartey waaxda amuuraha dibada Mareykanka oo dhaqaalahaasi sheegtey inay siinayso cidii soo gudbisa macluumadka sarkaalkan u qaabilsan Al-Shabaab arimaha dacwada iyo dhaqaale ururinta.
Neefka geela ah wuxuu xiligan Soomaaliya ka jooga 700 oo doolar taasi macnaheedu waxay tahay in 7 kun oo doolar Shabaabku saareen madaxa Barack Obama, halka digaaga la dul dhigay madaxa Hilary Clinton uu ku kacayo in ka yar 50 doolar.
Hadalkan ka soo baxay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waxaa 24-kii saac ee la soo dhaafay si weyn u hadal hayey saxaafada wadanka Mareykanka, iyadoo Telefishinka caanka ah ee CNN uu ka mid yahay warbaahinta Mareykanka ee sida weyn u hadal haysa warkan ka soo baxay Shabaabka.
Link-ga audio hoose ka dhageyso hadalka Sheekh Fu’aad Maxamed Khalaf oo Geel & Digaag dul dhigay madaxa Obama & Mrs Clinton.
Juun 10, 2012 at 11:22 am
Dhaman hallan waxan kasalamay umad musulimka